Gobaladda Waqooyi waxa ay xaqiijisay kiisas cusub oo Covid-19 ah.
Wasaaradda Caafimaadka Xfs Oo Xaqiijisay In Qof Saddexaad Oo…
Kiisaska Coronavirus deegaannada Gobaladda Waqooyi ayaa sii kordhaya, kadib markii Baaris lagu sameeyay dad looga shakiyay xannuunka iyo kuwo lagu arkay calaamadaha lagu aqoonsado Covid-19.
Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Gobaladda Waqooyi ayaa soo bandhigtay natiijada kasoo baxday baaristii ugu dambeysay ee ay ku sameeyeen Shaybaarka guud ee Magaalada Hargeysa ee xarunta Maamulkaas.
Maanta oo Isniin ah Wasaaradda Caafimaadka Gobaladda Waqooyi waxa ay shaacisay in la baaray 75-ruux, kaliya xannuunka jirkooda laga helay 28- qof oo 21-kamid ah ay joogaan Magaalada Hargeysa.
6-ruux ayaa ku sugan Magaalada Boorama ee Xarunta Gobolka Awdal iyo Hal qof oo isna jooga Magaalada Gabileey ee Gobolka Woqooyi Galbeed Jamhuuriyadda Sooamaliya, dadkaas ayaa la geliyay karaantiil oo waxaa lagu xareeyay xarumaha lagu hayo bukaanada laga helo Covid-19.
Magaalada Hargeysa hal qof oo laga helay fayruska ayaa dhintay, tirada dadka u geeriyooday xannuunka Corovirus waa 22-ruux guud ahaan Deegaanada Maamulka Gobaladda Waqooyi, 332-ruux oo laga helay fayruska iyo 43-qof oo ka caafimaaday Covid-19.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Guddiga Hogamiye Muuse Biixi uu u xilsaaray kahor tagga faafidda Cudurka waxa ay wadajir usoo wada jeediyeen in la dhaqangeliyo fariimaha loo arko in lagu yareyn karo Covid-19.